I-Adelaide 2 bdrm iyunithi yasimahla yeWIFI, iNetflix kunye ne-carpark
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDiane
Unelanga, uzenzele walungisa amagumbi amabini okulala kumazantsi eentaba ezintle zeAdelaide. Yonwabela indawo ethe cwaka, enamagqabi eTorrens Park. Unendawo yakho, imfihlo, indawo yokupaka kunye nendawo yakho yokungena yabucala. Umgama oyi-12 min ukuya esixekweni kunye nemizuzu emi-5 ukuya kwiziko lokuthenga laseMitcham. Yimizuzu engama-20 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya. Isikhululo sebhasi kunye nesikhululo sikaloliwe sikufutshane.
Indawo yakho yeendwendwe izimele ngokupheleleyo inomnyango owahlukileyo. Iimpawu ziquka igumbi lokulala elikhulu elinendawo enkulu kunye nebhedi yokumkanikazi egcwele ukukhanya kwelanga. Kukwakho negumbi lokulala lesibini elinebhedi ephindwe kabini nayo igcwele ukukhanya. Kubonelelwe ngelinen yebhedi esemgangathweni kunye neetawuli zokuhlambela.
Ungeno olubanzi olungaphambili luya kuvula ikhitshi. Ukuhamba kancinci epasejini kuvula igumbi lokuphumla kunye nendawo yokutyela. Kwigumbi lokuhlambela kukho ishawa kunye nebhafu yokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo..
4.89 ·Izimvo eziyi-64
4.89 · Izimvo eziyi-64
Kufuphi na kukho iWindy Point encotsheni yokutyela enombono wepanorama. Kukho iindlela zokuhamba kunye nemibono ebalaseleyo kwiRandell Park Reserve ekumgama wemizuzu emi-5.
We are a New Zealand family with two boys. We love holidays especially near the coast.
Ifulethi elizimeleyo lidibana nendlu yethu. Siza kufumaneka ngokulula kulo naluphi na ulwazi ngexesha lokuhlala kwakho, sikutsalele umnxeba nje. Ubumfihlo bakho buqinisekisiwe. Ufikelelo ngekhowudi yephini.